Waxyaabaha Farxada iyo niyad jabka lahaa ee lagu arkay tartanka koobka adduunka… – Hagaag.com
Waxyaabaha Farxada iyo niyad jabka lahaa ee lagu arkay tartanka koobka adduunka…
Posted on 15 Luulyo 2018 by Admin in Sports // 0 Comments
Taageerayaasha iyo dadka jecel kubada cagta ayaa ku noolaa waqti farxadeed iyo niyad jab muddadii la soo dhaafay ee socotay kulamada tartanka Koobka Adduunka, taas oo lagu arkay dhacdooyin yaab leh oo tiro badan oo aan horey loo arag iyo guulo taariikhi ah oo kooxaha qaarkood ay gaareen.
Waxyaabaha soo socda ayaa ahaa todobo waxyaabood oo muhiimka ah ee lagu arkay Koobka Aduunka:
Xifaaltankii Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo meesha ka baxay kadib markii kooxahooda macsalaameeyeen koobka adduunka, halkaasi waxaa fursad ka helay laacibiin kale inuu magacooda soo iftiimo oo la filayo in ay aado kubada dahabka dhinacooda, kadib markii muddo 10 sano ah gacanta ugu jirtay raggaasi oo gacantooda ka baxday.
Xiddiga reer Brazil Neymar, laacibka ugu qaalisan addunka ayaa wargeysyada iyo baraha khaaska ee sport-ga ayaa ku ifiyey toosh qaladaadkiisa soo noqnoqday iyo riwaayadaha uu dhigayey oo kooxdiisa Brazil ay ku guul dareysatay in ay ka gudubto Quarter Finalka.
Germany oo heysatay Koobka Adduunka ayaa ku baxday wareega group-yada markii ugu horeysay taariikhda muddo 80 sanadood ah, laakiin dadka wax naqdiya ayaan fileynin in South Korea ay ka reebi donto koobka adduunka.
England oo jebisay sixirkii muddada dheer ku dheganaa, waxay rigoorayaal uga guuleysatay Colombia, walow la ogyahay in seddax jeer koobka adduunka looga reebay rigoorayaal.
Ruushka oo lagu tilmaamayey kooxda ugu liidata koobka adduunka ayaa wacdaro dhigtay, waxayna gaareen wareega quarter finalka, Waxaa gacantooda uga maroojiyey rigoorayaal kooxda Croatia.
Markii ugu horeysay tan iyo 1982-kii, koox Afrikaan ah ma aysan soo gudbin wareega group-yada. Senegal ayaa aad ugu dhowaatay in ay soo baxaan, lakiin waxa ay ku dhameysteen kaalinta seddaxaad, waxay ku hareen rikoorka heysashada ganaaxa jaalaha, kadib markii ay Japan isku dhibic noqdeen.
Weeraryahanka Croatia Nikola Kalinic oo shan maalmood keliya la joogay kooxdiisa inta aanan lagu celin dalkiisa, kadib markii uu diiday inuu bedel ahaan ku galo ciyaartii ay la lahaayeen Nigeria, 22ka ciyaaryahan ee soo haray ayaa baraha bulshada lagula taliyey in aynan yeelin sidii Nicola Kalinic. Kooxda waxay joogtaa maanta finalka koobka adduunka.